Olive Oil (သံလွင်ဆီ) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Phyo Wai Yan မှ ရေးသားသည်။ 19/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Olive Oil (သံလွင်ဆီ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
သံလွင်ဆီကို နှလုံးအမောဖောက်ခြင်း နှင့် နှလုံးနှင့်သွေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ ၊ ရင်သားကင်ဆာ ၊ အူနှင့်စအိုကင်ဆာများ ၊ သွေးလေးဘက်နာရောဂါများ နဲ့ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းများကိုကာကွယ်ရန် အသုံးပြုကြပါတယ် ။
ဒါ့အပြင်ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ကိုလက်စရောဓါတ်များခြင်း၊သွေးပေါင်တက်ခြင်းဆီးချိုသွေးချိုနှင့်ပတ်သတ်နေသောသွေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ ၊ နားတွင်ပိုးဝင်ခြင်း ၊ အဆစ်ရောင်ခြင်း နှင့်သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်းများကိုကုသရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ အသည်းရောင်အသားဝါ ၊ အူလမ်းကြောင်းရှိဂတ်စ်များ နှင့် ဂတ်စ်များကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ရောင်ခြင်းများကိုကုသရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည် ။
နားတွင်းဆီ၊ နားအူခြင်း နှင့် နားထဲတွင်နာကျင်မှုများသက်သာစေရန် ၊ သန်းများ ၊ ဒဏ်ရာများ ၊ အသေးစားမီးလောင်ဒဏ်ရာများ ၊
အနီပိန့်များထွက်ခြင်း ၊ ကိုယ်ဝန်ကြောင့် အစင်းကြောင်းများထင်ကျန်နေခြင်း နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအရည်ပျက်စီးခြင်းများကိုကာကွယ်ရန်အရေပြားတွင်လိမ်း၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။
အစားအစာများတွင်တော့ချက်ပြုတ်ရန်နှင့် အသုတ်များတွင်အသုံးပြုရန်ဆီအနေနဲ့အသုံးပြုပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်းဆပ်ပြာများ ၊ ပလာစတာများနှင့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Olive Oil (သံလွင်ဆီ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သံလွင်ဆီအလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ပတ်သတ်ပြီး တိတိကျကျသိရဖို့ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ် ။ ဒီထက်သိရဖို့အတွက်တော့ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ် ။ သို့သော်အချို့လေ့လာမှုများကတော့ သံလွင်ဆီမှာပါဝင်တဲ့အဆီဓါတ်ဟာကိုလက်စ်ထရောကိုကျစေပြီး အရောင်ကျစေတဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ်။ သံလွင်ဆီအရွက်နဲ့သံလွင်ဆီတွေဟာ သွေးပေါင်ကိုလည်းကျစေပါတယ် ။
Olive Oil (သံလွင်ဆီ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
– ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် သို့ နို့တိုက်ကာလဖြစ်နေလျှင် သင့်ဆီကအာဟာရတွေကလေးဆီရောက်နေသောကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့အရင်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
– သင်ဟာအခြားဆေးဝါးများကိုသောက်သုံးနေခြင်း။ အခြားဆေးဝါးများဆိုရာတွင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ အပြင်မှာဝယ်လို့ရသောဆေးများလည်းပါဝင်ပါတယ်။
-သင်သည်ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ ၊ ဆေးများ ၊သံလွင်ဆီပါဝင်သောပစ္စည်းများနှင့်ဓါတ်မတည့်လျှင်..။
-သင့်တွင်အခြားဓါတ်မတည့်မှုများရှိနေခြင်း ၊ဥပမာ.. အစားအစာများ ၊ဆိုးဆေးများနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ။
ဒါတွေသင့်မှာရှိနေရင်တော့ သံလွင်ဆီကိုအသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့အရင်တိုင်ပင်ရပါမယ်။
ဆေးဘက်ဝင်အပင်မျာကိုထိန်းညှိရခြင်းဟာ ဆေးများကိုထိန်းချုပ်ရခြင်းထပ်ပိုပြီး ဘောင်ကျဉ်းပါတယ်။ စိတ်ချရမှုအတွက်လေ့လာစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုပါသေးတယ်။ ဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေပါတဲ့ဖြည့်စွက်စာတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာ အသုံးမပြုခင်ရှိနေသော အန္တရာယ်ရောဂါများကိုသက်သာစေပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးသိရဖို့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးသင့်ပါတယ်။
သံလွင်ဆီဟာပါးစပ်မှသောက်သုံးလျှင်ဖြစ်စေ၊အရေပြားတွင်လိမ်းလျှင်ဖြစ်စေ အများအားဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းကြပါတယ် ။ သံလွင်ဆီကိုနေ့စဉ်လိုအပ်သောကယ်လိုရီ၁၄ ရာခိုင်းနှုန်းအထိစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ တစ်နေ့ကို လက်ဖက်ရည် ၂ ဇွန်းပမာဏအထိစိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်ပါတယ် ။ မြေထဲပင်လယ်ဒေသများတွင်တော့တစ်ပါတ်ကို ၁ လီတာအထိအစားအစာများတွင်ထည့်သွင်းစားသုံးကြပါတယ် ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Olive Oil (သံလွင်ဆီ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်နေစဉ်မှာ သံလွင်ဆီသုံးစွဲခြင်းဟာစိတ်ချရတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်တဲ့လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေမရှိသေးပါဘူး ။ အစားအစာထဲတွင်ထည့်သွင်းစားသုံးသောပမာဏထက်ပိုပြီးများများ မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး ။
သံလွင်ဆီကိုပါးစပ်မှတစ်ဆင့်စားသုံးခြင်း သို့ အရေပြားပေါ်တွင်လိမ်းခြင်းဟာ အန္တရာယ်ကင်းပါတယ် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များတွင်တော့ စိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးသက်သေပြနိုင်မယ့် စမ်းသပ်မှုတွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိသေးပါတယ် ။ မသုံးစွဲတာဟာစိတ်အချရဆုံးဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိပဲသုံးစွဲခြင်းမျိုးမှရှောင်ကျဉ်ရပါမယ် ။
Olive Oil (သံလွင်ဆီ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
သံလွင်ဆီကိုအရေပြားတွင်လိမ်းခြင်းဟာ ဓါတ်မတည့်မှုများကြာရှည်စွာဖြစ်ခြင်းနဲ့အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။
လူတိုင်းတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမခံစားရပါဘူး ။ အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းထဲမှာမပါတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ် ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအကြောင်းကိုသေချာသိရဖို့ လုံလောက်တဲ့စမ်းသပ်မှုတွေမရှိသေးပါဘူး ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးသေသေချာချာထပ်သိချင်ရင်တော့ ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် ။
ဘယ်ဆေးတွေက Olive Oil (သံလွင်ဆီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သံလွင်ဆီဟာသင်လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးဝါးနေတဲ့သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်နှင့်အရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် ။ သံလွင်ဆီနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ဆေးတွေကတော့ ဆီးချိုအတွက်သုံးစွဲသည့်ဆေးများဖြစ်သည့်…..
glimepiride (Amaryl), glyburide (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), insulin, pioglitazone (Actos), rosiglitazone (Avandia), chlorpropamide (Diabinese), glipizide (Glucotrol), tolbutamide (Orinase) စသည့်ဆေးများနဲ့သက်ရောက်ခြင်းရှိနိုင်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင်သံလွင်ဆီဟာ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကိုကျစေတဲ့အာနိသင်ရှိတာကြောင့် ဆီးချိုကျဆေးများသုံးစွဲနေစဉ်မှာသံလွင်ဆီနှင့်တွဲသုံးမိပါက သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကိုအလွန်အမင်းကျဆင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဆီးချိုဆေးပမာဏကိုပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ် ။
(Antihypertensive drugs): captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), losartan (Cozaar), valsartan (Diovan), diltiazem (Cardizem), Amlodipine (Norvasc), hydrochlorothiazide (HydroDIURIL), furosemide (Lasix), ..စတဲ့ဆေးများနဲ့ဓါတ်ပြုသက်ရောက်ခြင်းရှိနိုင်ပါတယ် ။
သံလွင်ဆီဟာသွေးပေါင်ကျစေတဲ့အာနိသင်ရှိတာကြောင့် သွေးပေါင်ကျဆေးနဲ့တွဲဖက်သောက်သုံးပါက သွေးပေါင်အလွန်အမင်းကျခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Olive Oil (သံလွင်ဆီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သံလွင်ဆီဟာ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကိုလျော့နည်းစေတဲ့အတွက်သံလွင်ဆီစားသုံးနေစဉ်မှာ သကြားပမာဏကို မကြာခဏစစ်ဆေးနေရပါမယ် ။
သံလွင်ဆီဟာ ခွဲစိတ်နေစဉ်နဲ့ခွဲစိတ်အပြီးမှာသွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ထိန်းချုပ်ရခက်ခဲစေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ခွဲစိတ်မှုမစတင်ခင် ၂ ပါတ်အလိုမှစ၍သံလွင်ဆီသုံးစွဲခြင်းကိုရပ်တန့်ရပါမယ် ။
Olive Oil (သံလွင်ဆီ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
– ဝမ်းချုပ်ရာတွင်သံလွင်ဆီ30 ml သောက်သုံးရပါမယ် ။
– သွေးပေါင်တက်ခြင်းအတွက်အစားအစာများတွင်သံလွင်ဆီ 30 gram မှ 40 gram အထိထည့်သွင်းစားသုံးရပါမည်။ သံလွင်ရွက်မှထုတ်လုပ်ထားသောအဆီအနှစ်များကိုလည်းသွေးပေါင်တက်ခြင်းတွင် တနေ့ကို၄ ကြိမ် တခါသောက်လျှင် ၄၀၀ ဂရမ်စီသောက်သုံးနိုင်ပါတယ် ။
– ကိုလက်စ်ထရောဓါတ်များခြင်းတွင်အစားအစာထဲတွင် ပြည့်ဝဆီနေရာတွင် မပြည့်ဝဆီ၁၇.၅ ဂရမ်ပေးနိုင်သည့် သံလွင်ဆီကို တစ်နေ့ကို ၂၃ ဂရမ်စီထည့်သွင်းစားသုံးရပါမည်။
– နှလုံးအမောဖောက်ခြင်းနှင့် နှလုံးရောဂါများမှကာကွယ်နိုင်ရန် သံလွင်ဆီကိုတစ်နေ့လျှင် ၅၄ ဂရမ် စားသုံးပေးရပါမယ် ။ မြေထဲပင်လယ်ဒေသမှလူများသည် တစ်ပါတ်ကို သံလွင်ဆီ၁ လီတာအထိအစားအစာများထဲတွင်ထည့်သွင်းစားသုံးကြပါတယ် ။
သုံးစွဲရန်သံလွင်ဆီပမာဏဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီနိုင်ပါဘူး ။ သင်သုံးစွဲရမည့်ပမာဏသည် သင့်ရဲ့အသက်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ နှင့်အခြားအခြေအနေများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်နေပါသေးတယ် ။
Olive Oil (သံလွင်ဆီ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Olive OilOlive oil. http://www.livestrong.com/article/142825-side-effects-olive-leaf-extract/. Accessed April, 06, 2017.
Olive OilOlive oil. http://www.medicinenet.com/olive/supplements-vitamins.htm. Accessed April, 06, 2017.
Olive OilOlive oil. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-233-OLIVE.aspx?activeIngredientId=233&activeIngredientName=OLIVE&source=2. Accessed April, 06, 2017.